China SUS304 musanganiswa 24 misoro yakawanda inorema fekitori uye vagadziri | Smart Weigh
SUS304 musanganiswa 24 misoro yakawanda kurema
Musoro we24 weigher unogona kuyera uye kusanganisa 2-8 mhando dzezvigadzirwa panguva imwe chete, zvinowanzoitirwa bhinzi, zviyo, nzungu, michero yakaoma, hove dzakaomarara uye mamwe mapurojekiti ekusanganisa.
Machine furemu: 4 chigadziko
Hopper Vhoriyamu: 0.8L / 1L
Chikafu Kutaurirana Chikamu Maitiro: Plain ndiro / Embossing ndiro
Wepamusoro Cone Kushanda Chimiro: Vibration
Musanganiswa: 4-6 mhando
Isina mvura Giredhi: IP65
Kudzora Sisitimu: Modular kuzvidzora
SW-M324 multihead weigher ane matatu akaturikidzana hopper: feed hopper, uremu hopper uye memory hopper. Smart Weigh ine hunyanzvi hwemitsara mitatu hopper 24 musoro weigher: iyo yekuyera hopper uye memory hopper ichashanda pamwechete kune huremu mubatanidzwa.
1-200 x6 gramu
1-300 x4 magiramu
1-500 x3 magiramu
1-800 x2 gr
50 mabhegi / min
220V 50 / 60HZ, chikamu chimwe chete
Stepper mota (modular kutyaira)
Iko kusanganiswa kwakawanda musoro weiyeri inokodzera mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, inogona kusvika kuyera uye kusanganisa panguva imwe chete. Sevha nzvimbo uye udzikise mutengo wekugadzirisa wemashini.
• Kusanganisa 2-6 mhando dzezvigadzirwa zvekusarudza, ine memory hopper mune yekumhanyisa uye chaiyo;
• matatu matatu masero anowanikwa: musanganiswa, mapatya & kamwechete kurongedza;
Preset yekudzedzereka yekurasa basa kuti umise kuvhara;
• Zvikafu zvekudyidzana zvikamu disassembling pasina zvishandiso, zviri nyore kuchenesa.
Smart Weigh inopa yakasarudzika 3D maonero (iyo yechina maonero pazasi). Uyu ndiwo musanganiswa matatu wemusoro 24 wemusoro wemusoro wakakura.
Inowanikwa Packing Machine
14 musoro unoregedzera wekumashure kupakudza muchina unogona kugadzira pilo bhegi kana gusset bag. Chikwama chinoita ne roll roll.
14 musoro weigher unoshanda nemuchina wekutakurisa kurongedza muchina. Iyo yakakodzera yakagadzirirwa pasita bag bag, senge doypack.
14 misoro inorema inoshanda ne tray denester. Iyo inogona kuwana isina tereyi auto kudyisa, auto kuyera uye kuzadza mumatiraki, auto kutumira yakapera matraki kune inotevera michina.
Thermoforming / tireyi kurongedza muchina
14 musoro weigher unoshanda neyekutambanudza firimu kurongedza muchina
1. Chii chinonzi modular control system?
Modular control system inoreva bhodhi control system. Amai bhodhi vanoverenga seuropi, dhodhi bhodhi inodzora muchina unoshanda. Smart Weigh multihead weigher inoshandisa iyo 3rd modular control system. 1 drive bhodhi inodzora 1 feed hopper uye 1 kurema hopper. Kana paine 1 hopper yatsemuka, rambidza iyo hopper pane yekubata skrini. Mamwe hoppers anogona kushanda senguva dzose. Uye iro rekutyaira bhodhi rakajairika mu Smart Weigh akateedzana multihead weigher. Semuenzaniso, kwete. 2 drive bhodhi inogona kushandiswa kwete. 5 dhiraivha bhodhi. Zviri nyore kuti wemari uye kugadzira.
2. Izvi zvinorema kungoremedza 1 chete uremu?
Iyo inogona kuyera zviyero zvakasiyana, ingochinja huremu paramende pane yekubata screen. Kuita nyore.
3. Muchina uyu wese wakagadzirwa nesimbi isina tsvina here?
Hongu, kuvakwa kwemushini, furemu, uye zvikamu zvekudyidzana zvekudya zvese zviri chikafu-giredhi simbi 304. Tine chitupa nezvenyaya iyi, tinofara kukutumira kana zvichidikanwa.
4. Kana ndikatenga iyo inorema yezvigadzirwa zvemusanganiswa, ndinogona kuyera 1 chigadzirwa mune ramangwana?
Ehe. Kana iri 4 musanganiswa weigher, kana iwe uchida kuyera 200g zvigadzirwa, wega weigher iwe waunoisa chakanangwa uremu i50g. Kurema kwekupedzisira i200 gramu.
Yepfuura: SUS304 yakakwirira kumhanya 14 misoro yakawanda kurema
Zvadaro: SUS304 Standard 10 misoro yakarebesa huremu
Modular control system inoreva bhodhi control system. Amai bhodhi vanoverenga sehuropi, dhodhi bhodhi inodzora muchina unoshanda. Smart Weight multhead weigher inoshandisa 3rd modular control system. 1 drive bhodhi inodzora 1 feed hopper uye 1 kurema hopper. Kana paine 1 hopper yatsemuka, rambidza iyo hopper pane yekubata skrini. Imwe hopper inogona kushanda senguva dzose.
Uye iro rekutyaira bhodhi rakajairika mu Smart Weigh akateedzana multihead weigher. Semuenzaniso, kwete. 2 drive bhodhi inogona kushandiswa kwete. 5 dhiraivha bhodhi. Iyo iri nyore kune stock uye kuchengetedza.
musanganiswa Multipter Weight
machira akawanda anorema kurongedza muchina
Mini yakakwirira nemazvo 14 musoro multihead weigher fo ...
SUS304 Standard 10 misoro yakarebesa huremu
SUS304 yakakwirira kumhanya 14 misoro yakawanda kurema